Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimka Chak De! India Ee Super Star Shah Rukh Khan Hogaamiyaha Ka Yahay (Codsi Aqriste) – Filimside.net
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimka Chak De! India Ee Super Star Shah Rukh Khan Hogaamiyaha Ka Yahay (Codsi Aqriste)
October 11, 2017 Ali Aadan
Filimka Chak De! India waa mid kamid ah aflaamta SRK ugu wanaagsan sheeka ahaan iyo ganacsi ahaanba, waxaana la daawaday 10 Aug 2007 waxaana kasoo diyaarinay xaqiiqooyin u gaar ah filimkaan maadama aqristayaashena mid kamid ah naga codsaday.
Hogaamiyaasha filimkaan Super Hitka Weyn Noqday: Shah Rukh khan ayaa hogaaminaayo waana filim ka hadlaayo Sports ka waxaana Director ka ah Shimir Amin halka Aditya Chopra uu soo saare ka yahay ama maalgaliye.
Fadlan Halkaan Hoose Kaga Bogo Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimka Chak De! India:
Xaqiiqada 1aad: Filimkaan wuxuu sababay in daafaha caalamka laga jeclaado in kabadan inta laga jeclaaday gudaha India sido kalena qofwalba wuxuu xiligaas xiiso u qabay inuu ciyaaro ciyaarta lagu magacaabo Hockey ee filimkaan lagu soo bandhigay.
Xaqiiqada 2aad: Gabdhaha filimkaan qeybta weyn ka qaateen ayaa lashegay in la tababaraayey mudo 3-4 bilood ah si ay kaga run sheegaan ciyaarta Hockey ee ay filimkaan ku jileen bandhigoodana wuxuu u muuqday dad waligood ciyaartaan yaqiineen.
Xaqiiqada 3aad: Filimkaan asal ahaan wuxuu ka hadlayaa nolosha halyeegii ciyaarta Xeegan ee Hocky ciyaari jiray ee Mirranjan Negi.
Xaqiiqada 4aad: SRK wuxuu filimkaan ku qaatay abaal marinta shirkada Filimfare bixiso qeybta atooraha ugu wanaagsan waliba waxay ahed markii todobaad oo uu biladaan kuguulesto sanadkii 2008 markii xaflada la qabtay.
Xaqiiqada 5aad: Atooraha John Abraham ayaa ahaa dooqa koowaad ee filimkaan waliba waxaa lala rabay doorka SRK balse xidigaan uma suurto galin inuu sameyo doorkaan caanka ahaa sababo aan la aqoon awged.
Xaqiiqada 6aad: Markale doorka SRK waxaa loo bandhigay Mega Star Salman Khan inuu hogaamiyo filimkaan balse Sallu oo mashquul ahaa awged uma saamixin wuuna iska diiday mashruucan.
Xaqiiqada 7aad: SRK wuxuu u tartamay oo uu ku guulesan lahaa abaal marinta qaaliga ah ee National Filim Award ee dowlada India bixiso waliba qeybta atooraha ugu fiican balse waxaa meel uusan filaneynin oga soobaxay Prakash Raj (Seerabtaa) oo watay filimkii Kanchivaram oo uu ku qaatay atooraha ugu wanaagsan.
Xaqiiqada 8aad: Super Star Akshay Kumar ayaa kamid ahaa xidigaha filimkaan inee hogaamiyaan lala rabay balse uma suurto galin Akki ugu dambena waxaa calfaday doorkaan SRK oo amaan iyo abaal marinba ku qaatay.
Waxaa Aqrisay 489
Gabdhaha ciyaartoyga ah dhowr ayaa si dhab ah u ciyaari jiray oo waliba heer gobol iyo heer iskoolaad usoo ciyaaray tartamo waddankooda ah. Teeda kale ciyaartan afsoomali xeegan ma ahaa ee xeego ayaa la dhahaa.